सवैको नजरमा परेको छु, जीत सुनिश्चित छः चिरन्जिवी थापा(अन्तर्वार्ता ) – - Enepalese.com
सवैको नजरमा परेको छु, जीत सुनिश्चित छः चिरन्जिवी थापा(अन्तर्वार्ता ) –
इनेप्लिज २०७२ साउन २३ गते २१:०६ मा प्रकाशित
चिरन्जिवी थापा जापानवासी नेपालीहरुको अग्लो स्थान मानिने गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए जापानको नयाँ नेतृत्वको प्रत्यासी हुनुहुन्छ । थापा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेसंगै जापानवासी नेपालीमाझ चर्चामा रहेनु भएको छ। एनआरएनए जापानको संस्थापक सदस्य, कार्यसमिति सदस्य तथा एक कार्यकाल उपाध्यक्ष, नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको संस्थापक हुदै दई पटक नेपाल फेस्टिवलको संयोजक, जापान विजनेस एसोसिएसनको महासचिव भईसकेको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको अनुभव संगाल्नुभएको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्ष पदमा पारसमणी पोखरेलसंग पराजित भई एनआरएनए जापानको सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएका थापा यस पटक नयाँ नेतृत्व हत्याउने दौडाहामा हुनुहुन्छ । सन २००२मा भाषा विद्यार्थीका रुपमा जापान प्रवेश गर्नुभएका थापाको रेष्टुरेन्ट व्यवसायसंगै सोलार पावरको व्यवसायमा समेत संलग्नता रहेको छ ।
प्रस्तुत छ आगामी सेप्टेम्वर ६ तारिकमा हुने सन २०१५-१७ कालागि एनआरएनए जापानको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका थापासंग नेपाल जापान डटकमका लागि आनन्द कोइरालाले एनआरएनए जापानको निर्वाचन र जापानवासी नेपालीहरुको विभिन्न विषयमा गरिएको कुराकानी संक्षेपः
तपाईको उम्मेदवारी किन र कसका लागि हो?
विशेष त जापानमा नेपालीहरुको संख्या वृद्धि भएको छ । संगै विद्यार्थी, डिपेन्डेन्ट, कुक तथा व्यवसायी नेपालीहरुको सख्या दिनानुदिन वढदो छ । तर नेपालीका लागि काम गर्ने एनआरएनए जापान संस्था केही कमजोर र केही काम गर्न नसकेको जस्तो देखिएकाले मैले नेतृत्वमा आएर केही नयाँ काम गर्नु पर्छ भन्ने साथी भाईहरुको सल्लाह र आफनो कार्य अनुभवका कारण यस पटक मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निणर्य गरेको हो ।
यतिवेला एनआरएनए संस्थाको पूर्ण शुद्धिकरण तथा नयाँ कार्ययोजनाहरुका लागि मैले नयाँ नेतृत्व गर्न चाहेको हो ।
कस्ता एजेण्डाहरु तयार गर्नुभएको छ तपाईले?
करिव ५० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरुको सख्या पुगेको छ । नेपाली तथा जापानी समुदायवीचको भाषाको समस्याहुदाँ सामाजिक तथा सास्कृतिक आदनप्रदानमा केही अभाव महसुस भएको छ । भाषा विद्यार्थीका रुपमा जापान प्रवेश गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरु, वर्किङ भिसामा आएका नेपालीहरु तथा डिपेन्डेन्ट भिसामा आएका नेपालीहरुवीच म किन एनआरएनए वन्ने भन्नेमा चिन्ताको विषय वनेको छ । प्रश्न खडा भएको छ । म किन र केका लागि भन्दा पनि एनआरएनए संस्थाको सदस्य हुदाँ नेपाल तथा नेपालीहरुमा पुग्ने फाईदा र सहयोगका निम्ति उत्प्रेरित गर्नको निम्ति म लागि पर्ने छु।
लामो समय राजनीतिक संस्थामा आवद्धता भएर तपाईले यतिवेला सामाजिक संस्थाको नेतृत्व ताक्नुभएको छ किन होला? के छ एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा?
मुख्य कुरा एनआरएनएले उठाएका विभिन्न गैरआवासीय नेपालीहरुको मुद्धा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु आवश्यक छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले मेरो अनुभवले अव सामाजिक संस्था मार्फत नेपाल र नेपाली समुदायको हितमा काम गर्ने भित्रि ईच्छा छ । नेपालमा कुनैपनि महत्वपूर्ण काम गर्न राजनीतिक लविङ नै आवश्यकता पर्ने भएकाले मलाई मेरो पृष्टभूमिले सहयोग गर्ने मलै सवैलाई जानकारी दिनुपर्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा भिजेको मान्छे त्यसमा पनि प्रजातान्त्रिक सोच भएको मान्छे समाजको हरेक क्षेत्रमा वुझेको हुनाले समाजको पक्षमा वकालत गर्न म सक्षम हुन्छु। त्यसैले मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
जापानमा वस्ने नेपालीहरुको यहाँले के कस्तो समस्या देख्नुहुन्छ? कसरी सम्वोधन गर्ने तपाईको लक्ष्य छ ?
यदि म एनआरएनए जापानको अध्यक्षमा चयन भएभने खास केही समस्याहरुको सहज रुपमा निराकरण गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । जस्तो विद्यार्थीहरु जो जापानमा आउनुभएको छ उहाँहरु धेरैको पूर्व तयारी र विना जानकारी जापानमा प्रवेश पाएको मैले पाएको छु । काम ढिलो पाउने, भाषाको समस्याले विभिन्न कठिनाई हुने, कामको चापका कारण पढाईमा पूर्णता नहुने लगायतका विभिन्न मानसिक समस्या झेल्नुपरेको पाएको छु। यस्तै डिपेन्डेन्टमा आउनेहरुले पनि स्वास्थ्यको वारेमा, सामान्य कानुनी नियम पालना तथा अन्य केही महत्वपूर्ण तयारीको विषयमा हामीले एउटा हेल्प डेक्स सूचना केन्द्र बनाउने हो भने धेरै सहज महसुस हुन्छ।
वसाईको वारेमा, रहन सहनका वारेमा कसरी नेपालबाटै सजग गराउने विषयमा पनि केही कार्ययोजना तयार गर्न सकिन्छ । यस्तै व्यवसाय गर्ने नेपालीहरुसंग जापानका वैकिङ क्षेत्रमा केही समन्वयको वारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । जापानको कर तथा नयाँ सरकारी नीतिका वारेमा वेलावेलामा छलफल अन्र्तक्रियाहरु गरेको खण्डमा सरल ढंगले व्यवसायको स्थायीकरण गर्न मद्धत पुरयाउने योजना छ । मैले यसै विषयमा पहिले पनि काम गरेको अनुभव भएकाले त्यस कामलाई निरन्तरता दिनेछु।
जापानमा वस्ने नेपालीहरुको विमा ईन्स्योरेन्सको नारा ल्याउनुभएको छ । कस्तो रुपमा र कसरी कार्यान्वय गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?
जापानमा वस्ने आम मानिसमा विमा अर्थात ईन्स्योरेन्स भनेको के हो? र किन? यसमा पैसा खर्च गर्ने भन्नेवारेमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । ईन्स्योरेन्स विनै हाम्रो जिवन धान्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई समय अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । जापानमा स्वास्थ्य तथा कुनैपनि भैपरि आउने अवस्थामा यसले आर्थिक रुपमा सहयोग गर्छ । कसैको अकालमा मृत्युभएको खण्डमा पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन सहयोग पुग्ने भएकाले यो विदेशमा वस्ने नेपालीहरुले बुझनै पर्ने र अत्यावश्यक छ भन्ने वारे जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना छ । जापानका राम्रा र सस्ता ईन्स्योरेन्स कम्पनीमा आवद्ध भएर सहज रुपले सेवा लिन सक्ने वातावरणका लागि मेरो पहल हुनेछ ।
सिमित सदस्य भएको जापानमा एनआरएनएको अधिवेशन पश्चात हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा धेरैको उम्मेदवारी परेको छ ? किन सदस्य भन्दा उम्मेदवार वढी भएको ?
विशेष त संगठन चुस्त नभएको, संगठनलाई पारदर्शी तथा सवैको पहुँचमा नपुरयाएको कारण यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । यो संगठनलाई भईरहेको ठूला घाटा हो । अर्को संगठनको नेतृत्वमा आफै केही गर्छु भन्दा पनि अर्काको जोडवलमा उम्मेदवारी दिने, परिचालित हुने प्रचलनले यस्तो अवस्था आएको हो । एनआरएन जापानलाई सवैको घर दैलोमा पुरयाउनुपर्छ सवैलाई समेटनु पर्छ भन्ने सोचका साथ अहिलेका उम्मेदवारहरु सजग छन भन्ने मलाई लाग्छ ।
थोरै पदमा धेरै उम्मेदवार आकांक्षीहरु देखिएका छन । अध्यक्ष पदमा मात्र चार जनाले आकांक्षा देखाएका छन तपाईहरु वीच सहमतिको संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
जापानको एनआरएनए संस्थाको हकमा भन्दा यो अहिले अपाङ्ग बनाएर राखिएको छ । अहिलेसम्म अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद आईसीसीले जहिल्यै प्रयोग मात्र गरेको छ सहमति र सहकार्य गराउने होईन लडाउने कार्यमात्र हुदै आएको छ । आईसीसीले आफनो अभिभावकिय भूमिका निभाउन सकेको छैन । अग्रजहरुको सुझाव नभई आफनै प्रकृतिले चलेको संस्था भएकाले यो पटक सवैले सहमति भने पनि लडाउने हिसावले आकांक्षीहरु आएकाले सहमति हुन गारहो छ ।
जापानवासीहरु तपाईहरुको सहमति भएको र सर्वसम्मत नेता चयन भएको हेर्न चाहन्छन । के गर्दा सहमति हुनसक्ला?
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सहमति हुन गारहो छ । अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका अध्यक्षमा प्रत्यासी तथा महासचिवका आकांक्षीहरुले धेरै खर्च गरिसकेको अवस्था छ । धेरै अगाडी वढी सकेका छन । खर्चको हिसावले अव सहमतिमा आउन सक्ने अवस्था देखिदैन । पछिल्लो अवस्थाको कुरा गर्दा मलाई केही साथीहरुले समर्थन गर्ने कुरा भईरहेको छ । नामै लिदाँ नरबहादुर थापा र तुलसीराम खरेलसंग मेरो कुराकानी भईरहेको छ हामी आपसमा सहमति गरेर जाने संभावना वढेको छ । तर आर्थिक रुपमा यतिको लगानी भईसकेपछि अन्य विषयले सहमति हुन अलिक संभावना कम छ ।
जव चुनाव लाग्यो झेलामा पैसा वोकेर सदस्यता वनाउदै हिडेको देखियो किन नेपालीहरुको सामाजिक संस्थामा यस्तो विकृति वढेको? तपाईले जित्नु भयो भने यस्तो प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ भन्ने ज्ञारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ?
मैले हरेक क्षेत्रमा जादाँ भन्ने गरेको कुरा नै केहो भने संगठनलाई चुस्त गर्ने छु। आर्थिक पारदर्शि तथा हरेक नेपालीलाई संस्थामा आवद्धता गराउने मेरो कार्ययोजना छ। चुनावलाई नभएर संगठनलाई वलियो बनाउने मेरो योजना हुनेछ । यस्तै अधिवेशन आउनुभन्दा तीन चार महिना पहिल्यै सदस्यता तथा अन्य विषयमा टुङ्गो लगाई सक्यो भने सहज रुपमा संगठन वलियो हुने अपेक्षा लिएको छु। जसका कारण अर्को कार्यकालका उम्मेदवारले ठूलो आर्थिक भार वोक्नु नपर्ने अवस्था मैले बनाउने छु। अर्को पटक देखि सर्वसाधारण जो सुकैपनि सहज रुपमा उम्मेदवारी दिन सक्ने वातावरण निमार्णमा मेरो प्रतिवद्धता रहेको छ ।
तपाईलाई जापानमा ‘गेम प्लेयर’ भनेर धेरैले चिन्ने गरेका छन, संगठनको नेतृत्वमा वसेर काम गरेको अनुभव नभएको भनिन्छ, सक्षम नेता वन्न सक्छु भनेर कसरी पुष्टि गर्नु हुन्छ ?
सहि कुरा उठाई दिनुभयो, म आफुले आफैलाई भन्दा आन्तरिक मुल्याङकनमा पनि कुनैपनि काममा योजना ल्याउन सक्षम छु । नेतृत्वमा अरुलाई सहयोग गर्दै आएको अनुभव छ। अरुलाई नेतृत्वमा लान मैले सधै ‘गेम प्ले’ गरेर वसे । यसलाई म स्विकार गर्छु । म भन्दा सक्षम तथा अग्रजलाई नेतृत्वमा पुरयाउन दिलो ज्यान दिएर लागेको हो, धेरैले मलाई ‘प्लेयर’ पनि भन्छन । मलाई नेतृत्वमा आउन नदिन मेरै साथीहरुले नदिएको अवस्थामा मैले सहेर वसेको थिए । तर, अव म नेतृत्वमा आए भने अहिलेसम्मको मेरो अनुभवले मेरो कार्यकाल फलदायी हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
अहिलेसम्मको करिव चार हजार हाराहारी मतदाता मध्ये तपाईको पक्षमा कति मत खस्ने दावी गर्नु हुन्छ?
हाम्रो टिमले करिव दुई हजार वढी नयाँ सदस्यता वनाएका छौ । त्यसमा करिव ५० प्रतिशत मात्र मत मेरो पक्षमा खसेपनि अन्य धेरै मेरा सहयोगी मित्रहरुको समर्थन मलाई हुने मेरो विश्वास छ । यसमा अझ म जापानमा पुरानो व्यक्ति, राजनीतिक रुपमा पनि मेरो योगदान र कार्यक्षमताको आधारमा मलाई मेरो पल्ला भारी भएको शुभचिन्तकहरुले म्यासेज गर्न थाल्नुभएको छ । मेरो चर्चा चुलिएको छ ।
जापानवासी नेपालीहरुमा राजदूतावासको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो व्याप्त छ, वढी आलोचना हुदै आएको छ, तपाईले नेपाली समुदायको नेतृत्वमा पुगे कसरी समन्वय गराउनुहुन्छ?
दूतावास कुटनीतिक नियोग हो । यो गाविस कार्यालय होइन । तसर्थ हरेक मान्छेको हेराई र वुझाई फरक देखिएको छ । पछिल्लो समय जापान आएकाहरुले गाविस कार्यालय होकी जस्तो सोच राख्नुहुन्छ, त्यो गलत हो । अझ केही हामै्र साथीहरु पनि यसवारेमा जानकार नहुदाँ धेरैमा भ्रम परेको छ । मेरो वुझाईमा जापानमा वस्ने नेपालीहरु सवैको हितका लागि खुलेको संस्थालाई गलत प्रचार गरेर वदनाम गर्न खोज्नु गलत हो । दूतावास नेपाल सरकारको विदेशमा नभई नहुने निकाय भएकाले मैले सकेसम्म भ्रम चिर्ने प्रयत्न गर्नुछु। त्यहाँको कमी कमजोरी हाम्रो पनि कमजोरी हो । यसलाई मनन गर्ने हो भने त्यहाँको सेवा पनि प्रभावकारी हुने मेरो विश्वास छ ।
जापानमा नेपाली समुदायको हितका लागि कुनै पनि निकायले सहयोग नगर्ने गरेको गुनासो छ । एनआरएनए संस्था पनि अव यसरी नै काम गर्ला? कस्तो योजना छ तपाईको?
जापानमा धेरै व्यवसायीक कम्पनी, रेमिटयान्स तथा होटल रेष्टुरेन्टहरु संचालनमा छन । उहाँहरु सवैसंगको सहकार्यमा एनआरएनए जापानको स्थायी कार्यालय र स्थायी कर्मचारीको नियुक्ती गरेर काम गर्ने हो भने हरेक निकायलाई सेवा दिन सहज पुग्छ । कुनैपनि गुनासो र अप्ठयारो अवस्थामा तत्काल सहयोग गर्न सकिन्छ । यदि मैले निर्वाचित भएर संस्थाको नेतृत्व पाएको खण्डमा यो कामलाई प्रभावकारी ढंगमा सुरु गर्ने योजना बनाएको छु।